Nitombo 1% : 323 963 ny mpiadina amin’ny BEPC 2016 | NewsMada
Nitombo 1% : 323 963 ny mpiadina amin’ny BEPC 2016
Par Taratra sur 25/06/2016
Mizotra tsara ny fanomanana ny ny CEPE sy ny BEPC amin’izao fotoana izao, hoy ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Nitombo ny isan’ny mpiadina.
Nitombo 1% ny isan’ny mpiadina BEPC ho an’ny taom-panadinana 2016, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny fanabeazana fototra sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, Andriamampandry Todisoa. Mahatratra 323 963 ny mpiadina hiatrika ny fanadinana raha 983 ny foibem-panadinana handray azy ireo mandritra ny efatra andro. 169 ny toerana hitondrana ny laza adina rehetra hotsaraina aorian’ny fiatrehana izany isan’andro. Efitrano 8 386 no nomanina handray ny mpiadina manerana ny Nosy. 159 074 ireo olona nisafidy ny option A, raha 164 889 ny option B. Coefficient telo avokoa ny taranja rehetra amin’ny option B ary tsy manao ny taranja tenim-pirenena vahiny ankoatra ny français izy ireo mandritra ny BEPC.
Momba ny laza adina, efa manodina izany eny amin’ny Cnapmad amin’izao fotoana izao ny tomponandraikitra. Any an-dakilasy, manamafy ny fizarana sy ny taranja mbola manavia ny mpianatra ny sekoly rehetra satria efa samy nahavita ny fandaharam-pianarana avokoa. Tsy vitsy koa ireo mpianatra 3ème efa hiatrika sahady ny fifaninanana hidirana amin’ny kilasy 2nde mialoha ny BEPC. Herinandro mialoha ny fanadinana vao zaraina any an-dakilasy ny taratasy fiantsoana amin’ny BEPC ho an’ny sekoly tsy miankina. Rehefa tsy mahaloa ny saram-pianarana farany, tsy mahazo ny taratasy fiantsoana ny mpiadina.
Hanomboka ny 18 jolay ny BEPC ary hifarana ny 21 jolay. Mifarana ny 8 jolay ho izao ny fampianarana ho an’ny ambaratonga rehetra fa anjaran’ny sekoly kosa ny mandray ny fepetra raha misy ny fanalavana tokony hatao ho an’ny kilasy manomana fanadinana, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra.